Uzenza njani izitikha zikaWhatsApp | Abadali be-Intanethi
Ngaphambili, bekunganyanzelekanga ukuba senze izinto ezincamathelayo kwizicelo ezithi, nangona bezizininzi, bezisoloko bengenazo iintetho okanye iindlela zokuzibonakalisa kubahlobo nosapho. Ngesi sizathu, kuye kwavela ii-apps ezisivumeleyo ukuba sibe nee-emoticons ezininzi kunye nokuzonwabisa kwaye zinokusetyenziswa nakwesiphi na isicelo. Kodwa, ezo zobuqu zifikile kwaye ngale ndlela, uninzi lukhangela indlela yokwenza izitikha ze-WhatsApp, kuba yenye yee -apps esizisebenzisa kakhulu kuzo. Uyazi ukuba kwenziwa njani?
Emva koko sikunika amanyathelo ekufuneka uwathathe ukwenza izitikha zakho ze-WhatsApp kwaye wonwabe emva kwemini udala uyilo lwakho.
1 Iimfuno omawuhlangabezane nazo ukwenza izitikha zikaWhatsApp
2 Yenza izincamathelisi zikaWhatsApp ngoMenzi wesincamathelisi
3 Ezinye ii-apps zokwenza izincamathelisi
3.3 Izincamathelisi eziphezulu uMenzi wezincamathelisi
4 Uzenza njani izincamathelisi ze-WhatsApp ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso
Iimfuno omawuhlangabezane nazo ukwenza izitikha zikaWhatsApp
Nangona kungekho nzima ukwenza izitikha ze-WhatsApp, inyani yile Kukho inani leemfuno ekufuneka kuhlangatyezwane nazo ukuze zisetyenziswe. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nokukwazi ukuqalisa.
Ezi inokuboniswa kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, kwaye ude uvumele nabanye ukuba bazonwabele.
Kodwa ziziphi iimfuneko ekumele kuhlangatyezwane nazo? Sithetha nge:
Imvelaphi ecacileyo. Kubalulekile ukuba zonke izitikha zenziwe ngemvelaphi ecacileyo.
Imilinganiselo echanekileyo. Ngokukodwa, 512x512px. Oku kuthetha ukuba imifanekiso eshukumayo, edla ngokuba yileyo sifuna ukuyisebenzisa, ayisebenzi kuthi kuba mikhulu kakhulu ngobungakanani. Ngaba oko kuthetha ukuba asinakuzisebenzisa? Akunjalo, kodwa ukulayisha nje umfanekiso kunye nokwenza ukuba ubukhulu bube bungaphezulu kokwaneleyo.
Ubungakanani obuchanekileyo. Kufuneka ibe ngaphantsi kwe-100KB. Ngamanye amazwi, kufuneka ubone ukuba umfanekiso unobunzima obuncinci kangangoko.
kufuneka ube ne Umda weepixels ezili-16 kwicala ngalinye lesincamathelisi. Ukuba ushiya umda omkhulu, umfanekiso uya kubonakala umncinci kwaye ukuba uhamba kakhulu, awuyi kubonwa.
Yenza izincamathelisi zikaWhatsApp ngoMenzi wesincamathelisi
Umthombo: Phone House Blog
Siza kukufundisa ukwenza izitikha zakho ze-WhatsApp usebenzisa umenzi wezincamathelisi, isicelo ekulula kakhulu ukusisebenzisa (kodwa ayisoso sodwa). Ukwenza oku, kufuneka uyifake kwiselula yakho.
Xa unayo, kwaye uyivule, iya kukuvumela ukuba wenze ipakethi entsha yezitikha. Ewe, unokwenza ezininzi ngexesha elinye, nto leyo eya kongela ixesha elininzi. Ukwenza oku, kufuneka unike uphawu + kwaye ubize ipakethe kunye nombhali oza kuyidala. Kanye emva kokuba ubethe ukudala kwaye umfanekiso onezincamathelisi ezingama-30 ziya kuvela, nto leyo ekuvumela ukuba udale kwangoko. Ewe, ungadala ubuninzi be-30, kodwa ubuncinci yi-1.
Ngoku kufuneka nje hamba ungenisa kwigalari yeselula yakho, okanye uthathe ifoto ngekhamera. Inzuzo onayo kukuba unokunqampuna indawo oyifunayo ukuze ufumane indawo yefoto onomdla kuyo.
Nje ukuba ube nesityalo, inyathelo elilandelayo onokukhetha kulo kukulungisa iifoto ngokongeza umbhalo, imibala, i-emojis, njl. phambi kokugqiba ngokwenza isitika. Nje ukuba unayo yonke into, konke okufuneka ukwenze kukucofa kwiqhosha elithi "Yongeza kuWhatsApp" kwaye baya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo.
Ewe kunjalo, kubalulekile ukuba sukucima usetyenziso xa sele ugqibile kuba, ukuba uyenzile, zonke izincamathelisi ozenzayo ngazo ziya kunyamalala.
Into entle kukuba unokwenza iipakethi zezitikha ezininzi njengoko ufuna, kwaye unokuzisebenzisa ngokukhululekileyo kwiincoko zakho.
Ezinye ii-apps zokwenza izincamathelisi
Nangona uMenzi weZincamatheliso ungoyena waziwa kakhulu kwaye ungoyena usetyenziswa kakhulu, inyani kukuba ayikuphela kwayo onokuthi ngayo wenze eyakho intetho ngeefoto zakho okanye ngemifanekiso ekwi-Intanethi. Ngokwenyani, unokhetho oluninzi onokuthi ulusebenzise kwaye banokukunika enye into le yangaphambili ayikunikiyo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ziyintoni na?
Yenye yezona zinto zaziwayo ukwenza izitikha zikaWhatsApp. Isimahla, njengale besiyichazile ngaphambili, kodwa imile ngaphandle kweyangaphambili kwilayibrari yayo yeefonti zokubhaliweyo.
Ngamanye amazwi, uya kuba noluhlu olukhulu lweefonti, ukuba uyathanda ukongeza isicatshulwa, esinokukwenza ukhethe olu setyenziso. Ukongeza, inethuba lokugcina amanxeba owenzayo ukuze uwasebenzise kwezinye izincamathelisi. Umzekelo, ukwenza uhlobo lwekholaji enamanani amaninzi.
Kwakhona ikhululekile, ivelele kwezi zangaphambili kuloo nto Ayinakuzenzela nje ezakho izincamathelisi oza kuzisebenzisa kuWhatsApp kodwa unokwabelana ngazo kwisicelo kwaye, kwangaxeshanye, ukhuphele izincamathelisi zabanye. abadali ukuba bazisebenzise nabo.
Iba luhlobo lwebhanki yeepakethi zezitikha apho unokufumana khona ubutyebi bokwenyani.
Izincamathelisi eziphezulu uMenzi wezincamathelisi
Kule meko yenza ngendlela efanayo naleyo yangaphambili, apho unayo Isiseko esihle seememes kunye nezitikha onokuthi uzikhuphele kwaye uzisebenzise, kodwa unokwenza eyakho.
Ewe kunjalo, ifumaneka kuphela kwi-iOS.
Ihlawulwe, kodwa ibetha umsebenzi enawo susa imvelaphi kwiifoto ngokulula, ngaphandle kokunqampuna, kodwa iyenza ngokuzenzekelayo kwaye ngesona siphumo sinokwenzeka.
Into entle kukuba ungangenisa ezinye izitikha okanye uzigcine kuGoogle Drive.
Uzenza njani izincamathelisi ze-WhatsApp ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso
Ngaba ungomnye wabo bangahambi kakuhle kakhulu kunye neselfowuni yakho ukuba usebenze kakhulu ngayo? Mhlawumbi omnye wabo bakhetha ukusebenzisa ikhompyuter endaweni yeselula? Okanye kwabo bangafuni ukuba nezicelo kunye nezicelo kwiselula yabo? Ewe, mhlawumbi kwaye oku kunomdla kuwe.
Kwaye unako yenza izitikha zakho ngeWhatsApp ngokuthe ngqo. Into ekufuneka uyenzile kukuya kwi inguqulelo yewebhu, yivule kwisikhangeli sakho kwaye ukhulule ubuchule bakho.
Kwaye kukuba, xa uyivula, uyazi ukuba iphuma ngokungathi ukuseselfowuni, inkulu kuphela. Ukuba ucofa kuyo nayiphi na incoko kwaye ucofe kwi icon ye-emoji, kwaye ukusuka apho kwizitikha, ezona ziqhelekileyo ziya kuvela kodwa, kunye nazo, iqhosha elithi Yenza nalo liya kuvela. Nje ukuba ucofe kuyo, isikrini siya kuvula apho kufuneka usixelele ukuba ngowuphi umfanekiso ofuna ukusebenza kuwo ukwenza isincamathelisi kuso.
Inyaniso kukuba kulula kakhulu kuba unokongeza iteksti, uyinqande, ubeke izincamathelisi ezininzi kuyo, uyipeyinte kwaye unqumle kwaye usike. Wakuba ugqibile ukusebenza, ngokucofa utolo olumhlophe luya kuthunyelwa. Kwaye ucinga ukuba awuyi? Ewe, awulunganga, kuba iya kugcinwa, nokuba unayo iselula ye-Android okanye i-iOS.
Ngoku uyabona ukuba kulula kangakanani ukwenza izitikha ze-WhatsApp, kufuneka uhle uye emsebenzini. Ngaba ukhe wayenza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani izitikha zeWhatsApp
Indlela yokwenza i-comic